Monsoons: kedu ihe ha bụ, kedu ka esi hibe ha na kedị ihe bụ nsonazụ ya | Netwọk Mgbasa Ozi
O doro anya na ị nụtụla banyere ya udu mmiri. Okwu a sitere n'okwu Arabic mausim y pụtara oge. Typedị aha a na-ekwu maka oge a na-atụgharị ikuku n’oké osimiri ndị dị n’etiti Arabia na India. Ntughari nke ikuku ndị a na mgbanwe oge a na-eme ka mmiri ozuzo buru ibu na mpaghara ndị nwere ihu igwe na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ. Oke mmiri ozuzo a na-ebibi ihe na ọdachi na oke ọdachi.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma maka oge udu mmiri, njirimara ha na mgbe ha mere.
1 Kedu ihe bụ monsoons
2 Isi ihe kpatara ya
3 Mondị udu mmiri
4 Mmetụta na-emebi
Kedu ihe bụ monsoons
Anyị nwere ike ikwu na monsoons Ha bụ nnukwu mgbanwe nke ikuku n’enweghị nsogbu banyere ntụzịaka nke na-eme ka ha fesie ike karịa mpaghara. NAMgbanwe a na mgbanwe mgbanwe ikuku na-adabere n’oge n’oge n’afọ. Nke a bụ otu anyị si emeso mgbanwe oge a na-ahụ maka oke mmiri ozuzo na mpaghara ndị nwere ihu igwe na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ.
Mpaghara ebe a na-ahụta udu mmiri bụ na Ndịda na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Ha nwekwara ike ime na mpaghara ndị ọzọ nke ụwa dịka Australia, West Africa na ọbụna America.
Ọ bụrụ na anyị enyochaa udu mmiri ahụ n'ụzọ sara mbara na nke miri emi karị, anyị nwere ike ịsị na ha bụ n'ihi mmetụta na-ekpo ọkụ nke a na-ebute site na ọdịiche dị n'etiti okpomoku nke ọtụtụ ala na oke osimiri. Anyị rute n’ebe ogbe mmiri, anyị ga - ahụ na oke mmiri na - eweta oke iru mmiri ma mee ka oge a kara aka. E nwere ọtụtụ usoro mmiri ozuzo na mbara ala. Oge a na-eme udu mmiri a na-adịkarị iche. Otu ihe atụ nke a ka anyị na-ahụ n'ebe ugwu nke Australia. N’ógbè a, oge udu mmiri na-amalite site na Disemba rue Machị.
N'aka nke ọzọ, na mpaghara India na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia anyị nwere udu mmiri na udu mmiri, nke na-emetụta ihu igwe nke ukwuu. Oge udu mmiri a bụ nsonazụ dị iche iche dị n'etiti ala na oke osimiri. Ọnọdụ okpomọkụ ndị a dị iche n'ihi ọrụ nke radieshon nke anyanwụ.
Isi ihe kpatara ya
Anyị ga-enyocha n'ụzọ zuru ezu ihe bụ isi kpatara na-akpata udu mmiri. Dịka anyị kwuburu na mbụ, ọ bụ ihe dị iche na ọnọdụ okpomọkụ dị n’etiti ala na oke osimiri ahụ maka okpomoku nke igwe n’anwụ na-enye. Ma ala ma mmiri dị n'oké osimiri nwere ọrụ maka ịmị ọkụ dị ukwuu ma n'ụzọ dị iche iche. Tozọ iji nweta okpomọkụ na-adabere na agba nke elu ọ bụla. N’oge a na-ekpo ọkụ, a na-eme ka elu ụwa kpoo ọkụ karịa mmiri. Nke a na - ebute etiti obere nrụgide n’elu ala na ebe nrụgide dị elu n’oké osimiri.
N'ịtụle mgbanwe nke ikuku, anyị nwere ike ịhụ na ifufe na-agbasa site na ebe enwere nrụgide ka ukwuu gaa ebe enwere obere nrụgide. Ihe dị iche n’etiti ala na mmiri ka amara dịka gradient gradient. Dabere na uru nke gradient gradient, ọsọ ọsọ nke ikuku ga-esi na mpaghara nwere nrụgide kachasị elu na nke dị ala ga-adị ngwa ngwa. Nke a sụgharịrị gaa ikuku dị elu dị elu. Ya mere, anyị na-enwe ajọ ifufe.
N'ọnọdụ ọ bụla, n'agbanyeghị usoro udu mmiri, ikuku na-esi n'oké osimiri na-efe ebe enwere ngosipụta ka ukwuu nye ala ọkụ ebe nrụgide na-erughị. Ikuku a nke ifufe na-eme ka mmiri dị ukwuu n’oké osimiri dọkpụrụ. Nke a bụ etu mmiri ozuzo si eto na mmiri na-amalite kemgbe ikuku mmiri na-arị elu wee laghachi n'oké osimiri. Mgbe ahu o noo n’elu ala ma we wetuo ma wedata ike ya ijigide mmiri.
Mondị udu mmiri
Anyị nwere ike ịkọwa ọdịiche dị iche iche nke monsoons dabere na isi ihe kpatara ya. Isi usoro nke mejupụtara ụdị monsoons ndị a bụ ndị a:
Ihe dị iche n’etiti ikpo oku na ime jụrụ oyi nke di n'etiti ala na mmiri.
Ntugharị nke ifufe. N'ihi na ifufe aghaghị ịga ebe dị anya, ọ na-emetụta ya mmetụta coriolis. Mmetụta a na-eme ka ntụgharị nke ụwa na-eme ka ifufe dị na mgbago ugwu na-agbada n'akụkụ aka nri ma na-aga n'akụkụ aka ekpe na ebe ndịda. Otú ahụ ka ọ dịkwa n’oké osimiri.
Okpomọkụ na ike mgbanwe Ihe na - eme dịka mmiri gbanwere site na mmiri ya gaa gas na mmiri gas na - enyekwa ike zuru oke iji mepụta udu mmiri.
Anyị maara nke ọma na oge ezumike Asia bụ ndị a kacha mara amara n'ụwa. Ọ bụrụ na anyị gawa n’ebe ndịda, udu mmiri na-amalite site n’ọnwa Eprel ruo Septemba. N'ebe a nke ụwa anyị, anyị ga-eburu n'uche na radieshon nke anyanwụ na-ebelata n'ụzọ kwụ ọtọ n'oge ọnwa ọkọchị. Nke a pụtara na ụzarị anyanwụ na-abata n’ụzọ nwere mmasị karị, bụ́ nke na-eme ka elu ala kpachapụghị ihu. N'ụzọ dị otú a, ikuku na-ekpo ọkụ na-ebili ma mepụta mpaghara nke nrụgide dị ala n'etiti etiti Eshia. Ka ọ dị ugbu a, mmiri dị n’Oké Osimiri Indian ka na-adịtụ jụụ ma bụrụkwa isi iyi nke mpaghara ndị nwere nrụgide dị elu.
Ọ bụrụ na anyị ejikọta mpaghara mgbali dị ala nke Central Asia na mpaghara nsogbu dị elu nke Oké Osimiri Indian, anyị nwere mmanya zuru oke iji mepụta mmiri udu mmiri. Ee ị ga-ekwu nke ahụ n'Esia ọtụtụ ọrụ akụ na ụba ya na-adabere n'oge udu mmiri. Anyi aghaghi ichefu na mmiri ozuzo di nma maka ihe ubi.
Otu n’ime ihe mmetụta ebido mmiri ozuzo bara ụba bụ oke mmiri ozuzo. Dika enwere uzo di elu di elu, a na eme ka mmiri ozuzo buru oke oke nke na-ebute idei mmiri na apịtị apịtị nke na-ebutekarita mmebi nke ulo obodo na ime obodo. Mbibi ndị a na-egbukwa ndị mmadụ.
Dị ka atụ anya, Nnukwu anụ ụlọ nwekwara akụkụ dị mma ha. Ma ọ bụ na ọtụtụ mpaghara Asia nwere ọrụ akụ na ụba ha na-adabere na udu mmiri. Ndị ọrụ ugbo na-adabere na mmiri ozuzo maka oke osikapa. Ọ na-eritekwa uru nye ndị na-akụ ahịhịa na ahịhịa na aquifers.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere monsoons.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Sobọchị Monsoons